June 5, 2020 Mahad Jama 5
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaciisa, kan Goleyaasha Dowladda iyo kan shacabka Puntland waxa uu ka tacsiyaynayaa geerida Alle ha u naxariistee Fanaan Cabdi Tahliil Warsame oo xalay ku geeriyoodey Muqdisho.
Cabdi Tahliil Warsame waxa uu dhashay sanadkii 1952-dii, wuxuu ahaa fanaan wadaniya oo noloshiisa inta badan kaga qayb qaatay kobcinta fanka Soomaaliyeed, Alle ha u naxariistee waxa uu ahaa tiir weyn oo ka baxay suugaanta Soomaaliyeed.
Madaxweyne Deni waxaa uu mar kale uga tacsiyaynayaa shacabka Soomaaliyeed, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo qoysaskii uu ka geeriyoodey Marxuum Cabdi Tahliil Warsame, wuxuuna Alle uga baryey inuu dembigiisa dhaafo, su’aasha qabriga u sakhiro, Jannadiisa Fardowsa ka waraabiyo.
Marxuunka ilaahay haw denbi dhaafo, janatal farduusana ha geeyo. Eheladiisa & umada afsoomaaliga ku hadasha een ehelo fanka ahna ee samir iyo iimaan eebe haka siiyo.
Allaha unaxarìsto Abdi tahliil Warsame jano fardowsa allaha geeyo qabriga allaha uwasiciyo ehelki iyo qaraabadi samir iyo iman Amiin
abdallah hersi says:
Ilaah ha u naxariisto Cabdi Tahaliil Warsame, wuxuu ahaa tiir ka baxay fanka soomaaliyeed
Ilaahay haw naxariisto marxuumka eheladiisa iyo Umadaha Ku hadla Afka Somaliga samir iyo iimaan alahaka siiyo, murxuumka mudo dheer ayuu ku silicsanaa Muuq-disho waana lagu daawanayey Xanuunka, Maryooley Iyadiina way is faquuqdaa oo iswada neceb tahay Umadaha Kalena way U dhakhdhakhleeyaan sida iminkaba ka socota USA. Maryooley Dhexdeeda dulmiga isku hayaan ma Arkaan laakiin Dadka kale Ee Ajnabiga Ah way la baroortaan Caqliga Dooni laydinka Saar.
Allaah (swt) ha u naxariisto Cabdi tahaliil.Cabdi reer Qardhuu ahaa.Samir iyo iimaan Allaah ha inaga wada siiyo.Geeridu waa lama dhaafaan.Waxaase dhiba in la ilaawo in ay dhimasho imaan karto daqiiqad kasta.